Indlela Yokulinganisa Izinsizakalo ze-SEO?
Ake siqale ekufuneni izinsizakalo ze-SEO ezinengqondo kakhulu. Ngokuvamile, ikota yokuqala yomkhankaso wokumaketha kwe-intanethi ingaphezu kokugxeka. Uzimisele kangakanani ukukhokhela imali esabelweni sakho sokumaketha? Njengoba kunama-ejensi amaningi edijithali enikeza izinsizakalo zawo kuwo wonke iwebhu futhi isikhathi sinobukhulu. Ngesikhathi usufika emasontweni amahle okuthatha isinqumo (noma ngisho nezinyanga) ekwenzeni izingcingo, noma izingxoxo ze-e-mail, izincintiswano zakho zizoqhubeka phambili, ngokuqhubekayo nokuqhubekayo. Ngakho-ke, kuwumqondo omuhle ukuthola izinsizakalo zenkampani ye-SEO enhle ngokushesha ngangokunokwenzeka. Nokho, intengo yabo, kufanele ibe nengqiqo ngokwanele, hhayi ekubhubhiseni isabelomali esimeme sokumaketha sokuqala kwesikhathi sokuqala.
Manje sizozama ukubona inkinga embonweni wezinjini zokusesha, okudingekayo ukuqonda amaphethini abo okuthandayo kanye nokuziphatha lapho bevuza amawebhusayithi anezikhundla eziphakeme. Okokuqala, ake sizame ukuzibuza imibuzo ebucayi:
Yini oyilindele ekubeni nensizakalo ye-SEO yenkampani?
Ucabangisisa i-SEO njengabantu bonke abazungezile?
Mhlawumbe umnyango wakho wokumaketha ugxile ekusebenzeni?
Noma uqinisekile ngalolu daba, uhlose ukuphakamisa isimo sakho sewebhusayithi nokuletha ukugeleza okukhulu kwemali esikhathini eside?
Masilethe ukufanisa okulula: ukuqasha izinsizakalo zezinsizakalo ze-SEO kufana nokuthenga imoto. Yebo, ngokungathí sina, ukukhetha kwakho kuzokwenziwe ngokwemvelo ngezidingo zakho, okuhambelaniswe nesilinganiso samanani esiphezulu ngokuphathelene nokucabanga nokukwazi ukukwazi ukukwazi ukukwazi ukuthenga ibhajethi yakho yamanje yokumaketha. Uhlelo oluhle kakhulu lwe-SEO luqala ngokuqaphela injongo yakho yomhlaba wonke kanye nezidingo zamakhasimende akho angahle. Kusukela kokuphambene, izinsizakalo zokusungula injini yokushibhile ngokuvamile zibukeka njengento yokuthengisana. Yebo, ungazama ukulondoloza imali ethile. Noma kunjalo, ngeke bakulethe okuningi.
Ngesikhathi esifanayo, ayikho izinga elilodwa uma kuziwa ekukhetheni iphakheji elifanele lezinsizakalo ze-SEO zenkampani. Isiphakamiso esibaluleke kunazo zonke ukuthi i-SEO ayikho mayelana nokulungisa izinto noma nje ukuyiyisa ku-oda. Ukubheka njengendlela yokwelapha okusheshayo ukuletha ukuthengisa kwakho ne-traffic yakho indlela engalungile. Ngokwenza kanjalo, uzophela kuphela ukuchitha imali yakho. Into ewukuthi i-SEO ephumelelayo kufanele ikunikeze i-ROI enengqondo: akukhona nje ngokuthola amazinga we-SERP angcono nokushaya ithrafikhi engaphezulu. Eqinisweni, umgomo omkhulu ukuguqula amakhasimende akho angakathuthuki ukuba abe nokuhamba okukhulu kwamakhasimende akhokhelwayo.
Ngakho-ke, uzothola kanjani ibhizinisi ngcono ngezinsizakalo ze-SEO zenkampani yezinga eliphezulu?
Okokuqala, kufanele ikusize ugxile ezintweni ezibalulekile, izidingo, nezinkinga zamaklayenti akho angakhona;
Ukubona imiphumela ejwayelekile kakhulu elindeleke yizethameli ezivela kuwebhusayithi yebhizinisi;
ukukusiza ngokukhomba nokuthuthukisa inani lakho lekhasi lokufika;
Ukukuthola zonke izindawo zokuzuza embonini ibhizinisi lakho lihilelekile kulo;
Thola isipiliyoni somsebenzisi esivakashi ngasinye njengomuntu siqu ngangokunokwenzeka, ukuguqula kuba abathengi.
Ngakho, izindleko zezinsizakalo ze-SEO zibheja emiphumeleni enomphumela ofuna ukuyithola, ikhwalithi yabo, kanye nesikhathi esihlala njalo. Ngokusobala, ukuthengiswa okungabizi kusho ukuthatha intuthuko elula. Khumbula, lokho okutshala imali akusikho okuthengiswa ngakho. I-ROI yakho ngokwemvelo ichaza i-SEO Source . Akungabaza, ukukhuphuka kwama-5, 10, noma okuphindwe ngu-20 emalini enenetha ngokumelene nalokho owachitha kuyisizathu esihle sokuthi: lokho akuzange kuthathe lutho kuwe!